Halyeeygii Arsenal Ee Ian Wright Oo Saadaaliyey Kooxda Uu Mo Saalax Ku Biiri Doono Real ama Barca %
Ian Wright ayaa wuxuu rumeysan yahay inay Liverpool, ku adkaan doonto inay ceshato Maxamed Saalax, kaasoo hada ay si weyn u ugaarsanayaa kooxaha Real Madrid iyo Barcelona, oo horyaalka Spain ee La Liga kawada dheela.
Mo Saalax ayaa wuxuu hadda ku jiraa bandhig ciyaareed heer sare ah, taasoo keentay in kooxahaan ay shiishka ku qabtaan, iyadoona ay ku baadi goobayaan aduun lacageed dhan 200 Milyan oo Yuuroo, taasoo ah midka qandaraaskiisa lagu burburin karo.
Liverpool, ayaa waxay lumisay bishii Janaayo ee lasoo dhaafay Philippe Coutinho, kadib markii Barcelona, ay uga gatay qiimo lacageed waali ah, iyadoona Wright uu aaminsan yahay in hadii ay iibiyaan Saalax ay utahay khasaaro ka daran tii Coutinho.
“Qof walba oo Premier League, yimaada kaasoo dhaliya goolal badan, waxaan ogtahay in lagu xukmin karo xaaladahaan oo kale,” ayuu Wright ku sheegay wareysi dhinacyo badan taabanaya, kaasoo uu siiyay Shabakada Sky Sport.
“Umalaynayo in Liverpool ay awood uleedahay inay ceshato Saalax hadii ay dhab ka tahay midkood kuwa lala xiriirinayo – Aniga ahaan waxaan qabaa in Real Madrid ay tahay mid qaaban karta, sababtoo ah Gareth Bale,” ayuu raaciyay.
“Bale hada ma ahan mid bandhig fiican ku sameyneen [Madrid] inkastoo Barca ay qaadan karto, hadana Los Blancos ayaa ah mida baahida ugu badan uqabta isaga,” ayuu hadalkiisa kusii daray, Khabiirkaan reer England.
“Laakiin, waxa ugu muhiimsan ayaa ah sida ay Liverpool ku ceshan karto – Hadii ay lumiyaan Saalax waxay ka khasaaro weyn tahay sida ay ulumiyeen Coutinho,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, Khabiir sarre Ian Wright.
BarcelonaIan WrightLiverpoolReal MadridSaalax